XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Madaxda Qaranka ay qorsheynayaan inay la kulmaan Siyaasiyiinta Mucaaraadka? (Maxaa socda oo aadan Ogeyn?) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Madaxda Qaranka ay qorsheynayaan inay la...
XOG XASAASI: Maxaa ka jira in Madaxda Qaranka ay qorsheynayaan inay la kulmaan Siyaasiyiinta Mucaaraadka? (Maxaa socda oo aadan Ogeyn?)
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxda Dowladda Soomaaliya iyo Siyaasiyiinta Madasha Xisbiyada Qaran ayaa waxaa lagu wadaa inay kulan ku yeeshaan Magaalada Muqdisho, si loo dejiyo xaaladda siyaasadeed ee dalka.
Toddobaadkii hore ayaa waxaa dalka laga dareemay xasarad siyaasadeed, ka dib markii Garoonka Aadan Cadde lagu xanibay wafdi uu hoggaaminayay Shariif Sheekh Axmed, Gudoomiyaha Madasha Xisbiyada Qaran oo ku wajahnaa Magaalada Baledweyne iyo jawaabtii adkeyd ee Shariifka uu ka bixiyay.
Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida iyo Sirdoonka Qaranka (NISA) oo habeenkii Jimcaha Shariif Sheekh Axmed ku booqday hoyga uu ka degan yahay Magaalada Muqdisho ayaa kala hadlay, sidii loo qaboojin lahaa xiisadda siyaasadeed ee dalka.
Ilo muhiim ah ayaa ku waramaya in Taliyaha NISA uu Shariif Sheekh Axmed ka raaligeliyay xayiraaddii lagu sameeyay diyaaraddii ay wafdigiisa ku taggeen Magaalada Baledweyne, isagoona ballanqaaday in markale aanay taasi dhici doonin.
Wararka ayaa sheegaya in Fahad Yaasiin uu xilligaa Shariif Sheekh Axmed u soo bandhigay in iyagoo ah Madasha Xisbiyada Qaran ay la kulmaan Madaxweyne Farmaajo, si labada dhinac isaga soo dhawaadaan arrimaha siyaasadda, Shariifkuna uu ka aqbalay.
Ilo lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in toddobaadkan ay Magaalada Muqdisho ku kulmi doonaan Madaxda Qaranka iyo Siyaasiyiinta Madasha Xisbiyada Qaran, iyagoo bulshada Soomaaliyeed u muujinaya in laga gudbay waxyaabihii walaaca ku dhaliyay.
Si kastaba, hHadal-hayn xoogan ayaa ka dhalatay xayiraadda marka labaad lagu sameeyay diyaaradihii uu safarka ku geli lahaa Shariif Sheekh Axmed iyo hanjabaadiisii ahayd in ay Magaalada Muqdisho ka saari doonaan dowladda, haddii aanay joojin sida khalafsan, ee ay kula dhaqmayso.
Dadka badankii ayaan jecleysan in Madaxdii hore ee dalka laga hor istaaggo safaro ay uga amba bixi lahaayen Magaalada Muqdisho, sidoo kalena ay wax laga xumaado ku tilmaameen farriintii dhiilada xambaarsaneyd ee ka soo yeertay Shariif Sheekh Axmed, Madaxweynihii hore ee Somaliya.
Ugu dambeyn, haddii ay toddobaadkan kulmaan Madaxda Qaranka iyo Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa waxaa la dhihi karaa Fahad Yaasiin waxaa uu ka hortagey inay dowladda iyo mucaaradka ku sii kala fogaadaan siyaasadda dalka.
Madaxdii hore dalka
Sheekh Sheekh Hoygiisa ku booqday
taliyaha NISA Fahad Yaasiin
axmed November 18, 2019 At 16:06
Kaasi waa munaafaqa Shabaab iyo qadarba u shaqeeya, waxa la yaaban yahay meesha uu siyaasada ka soo galay, waayo hadaad aragto wadan siyaasadiisa, cod waliba qasto, waa wadan burburaya. hala iska qabto dadkaan.